48 Jid-gaaban oo kiiboodhka Gmail ah oo anfacaya si aad sare ugu qaaddo wax soo saarkaaga | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/48 Jid-gaaban oo kiiboodhka Gmail ah oo anfacaya si aad sare ugu qaaddo wax soo saarkaaga
48 Jid-gaaban oo kiiboodhka Gmail ah oo anfacaya si aad sare ugu qaaddo wax soo saarkaaga
Haddii aad rabto inaad yarayso wakhtiga aad ku bixiso iimaylka, barashada furaha kiiboodhka Gmail waa maalgashi cajiib ah.
Eeg sida Behmaster oo ka soo horjeeda tartanka.
Dooro bixiyahaaga WP Motor SiteGround GoDaddy Bluehost Flywheel HostGator Daruuraha Aws Badbaadada Digitalka DreamHost kale
Sida inteena badan, waxaad u badan tahay inaad lumiso daqiiqado usbuuc kasta adigoo dhex maraaya sanduuqaaga boostada - haddii aad raadineyso faylal duug ah, iimaylo qaabeynaysa, ama laba jeer hubinta inaadan ku dhowdahay inaad Cc xafiiska oo dhan qorshooyinkaaga usbuuca.
Macasalaama waxaas oo dhan! Jidadka gaaban ee kiiboodhka Gmail-ka ayaa kaa dhimi doona culayska shaqada maalinlaha ah waxayna ku xorayn doonaan inaad dhamaystirto hawlo badan oo wax soo saar leh. Waxaan ku bilaabaynaa inaan sharaxno sida loo suurtageliyo fur-gaabyada kiiboodhka Gmail-ka, ka dibna dabooli doono 48-ka-gaaban ee Gmail-ka ah.
Diyaar? Aan bilowno!
Waa maxay Jidka gaaban ee Gmail?
Ka hor inta aynaan u daadagin liiskayaga jid-gaaban ee wakhtiga badbaadinaya, aynu si kooban u baadhno aasaaska furayaasha kiiboodhka. Jidka gaaban ee kiiboodhka waa furaha ama furayaal taxane ah oo dhamaystiraya ficilka uu qofku sida caadiga ah ku sameeyo jiirkiisa.
Waxaa jira jid-gaabyo badan oo caadi ah oo aad u badan tahay inaad hadda sawirto, sida Ctrl + C (Windows) ama ⌘+C (Mac) si aad u koobiyaysid qoraalka Hab-gaab kale oo caadi ah ayaa ah Ctrl + F (Windows) ama F + F (Mac) raadinta qoraalka Kuwani waxay u fiican yihiin wax soo saarka, laakiin maaha kuwa keliya ee furayaasha kiiboodhka.
Gmail waxa uu leeyahay habab gaagaaban oo u gaar ah oo si cad loogu habeeyey email-ka hufan. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo la isticmaalo hababkan gaaban:
Dhaqso ugu dhex dhex mari sanduuqaaga Gmail-ka
Samee ficilada qaabaynta maalin kasta adoon joojin socodkaaga.
Ilaali dhaqdhaqaaqyada ergonomic adiga oo meesha ka saaraya baahida loo qabo isticmaalka jiirkaaga.
Haddaba, sidee baad u shidaysaa furayaasha kiiboodhka?
Ma doonaysaa inaad dhimo wakhtiga aad ku bixiso iimaylka? 📧 Waxaad u baahan tahay furayaashan gaaban ⬇️Riix halkan Tweet
Sida loo Isticmaalo Keyboard-ka Gaaban ee Gmail-ka
Waxaad u baahan doontaa inaad gacanta ku shido furayaasha kiiboodhka Gmail ka hor inta aanad isticmaalin. Mahadsanid, waa hanaan toosan oo qurux badan. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad raacdo lixdan tallaabo:
Click ah Settings icon
Riix Eeg dhammaan dejimaha.
U gudbi Maababka gaaban qaybta.
Daar furayaasha kiiboodhka adiga oo dooranaya badhanka raadiyaha.
Riix Save hoose ee bogga.
Daarida furayaasha kiiboodhka ee Gmail
Haddii aad leedahay akoonno badan oo Gmail ah, waxaad u baahan doontaa inaad raacdo tillaabooyinkan akoon kasta.
Markaad shido furayaashaaga gaaban ee Gmail, waxaad u baahan doontaa inaad barato sida loo isticmaalo. Aan sahamin taas xigta.
Sideen u Heli Karaa Jidadka Kiiboodhka Gmail?
Google ayaa ku tusi doonta liiska gaaban ee kiiboodhka Gmail-ka iyada oo loo marayo menu-ga gaaban. Marka jid-gaabyada la furo, waxaad soo qaadan kartaa menu-ga gaaban adigoo haysta Shift+? Gmail-ka
The Maababka gaaban popup wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato inaad rabto inaad awood u yeelato ama aad gabto kooxaha gaaban, sida aad hoos ku arki karto:
Jidka gaaban ee kiiboodhka Gmail
Waxaa jira laba meelood oo muhiim ah oo aad ka heli karto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan jidadka gaaban.
Marka hore, waxaad ka heli doontaa liis-gaaban ee Gmail shabakadooda. Marka labaad, waxaad isticmaali kartaa qalabka tababarka gaaban ee kiiboodhka, sida Shortcut Foo.
Haddii aad rabto in aad balaadhiso jid-gaabyadaada oo dhaafsiisan kuwa caadiga ah ee Gmail, waxa kale oo aad samayn kartaa jid-gaabyo gaar ah. Si aad tan u samayso, waxaad u baahan doontaa inaad shido jid-gaabyada caadiga ah adoo raacaya tilmaamahan:
Tag Gmail oo dhagsii Settings.
Riix Awoodi ku xiga furayaasha kiiboodhka caadiga ah.
Press Save isbedel.
Waa maxay sababta Gaabannada Gmail-kaygu aanu wali u shaqayn?
Haddii aad raacday tillaabooyinka kore, fur-gaabyada kiiboodhkaagu waa inuu shaqeeyaa. Si kastaba ha ahaatee, dadku waxay mararka qaarkood la kulmaan xoogaa hiccus inta ay jidka ku jiraan.
Halkan waxaa ah saddex mid oo caadi ah iyo xalalkooda:
Jidadkaaga gaaban uma daarin si sax ah. Isku day inaad damiso fur-gaabyada kiiboodhkaga oo marlabaad shid.
Barowsarkaaga mareegahaagu waa dhacay. Cusbooneysii biraawsarkaaga, dib u bilow kombayutarka oo isku day mar kale.
Kordhintaadu waxay joojinaysaa dariiqyada gaaban ee kiiboodhka inay shaqeeyaan. Demi dhammaan kordhintaada oo tijaabi jid-gaabyadaada. Dabadeed, shid kordhintaada mid mid si aad u hesho dhibka kordhinta
Jid-gaabyada Gmail ee ugu Fiican
Qaybtan, waxaanu ku soo qaadan doonaa 48 kiiboodhka gaagaaban ee Gmail. Aan soo galno.
1. Kaydka iimayllada
Gawaarida Kiiboodhka: E
Jidka gaaban wuxuu qaadan doonaa dhammaan iimayllada aad dooratay oo u rari doontaa kaydkaaga. Markaad kaydiso iimaylka ama wada hadalka, Gmail ma tirtiri doono. Taa beddelkeeda, Gmail wuxuu ka saarayaa sanduuqaaga oo wuxuu geliyaa galkaaga "Dhammaan Boostada".
2. Samee iimaylka
Gawaarida Kiiboodhka: C
Jidka gaaban ee quruxda badan wuxuu ka furayaa iimayl cusub shaashaddaada, si la mid ah kan + Abuur badhanka. Aad bay ugu fiican tahay in la dedejiyo iimaylka maalinlaha ah. Si kastaba ha ahaatee, ha cadaadin C mar labaad haddii iimaylkaagu uusan isla markiiba soo shubin, ama waxaad furi doontaa daaqad kale oo iimayl ah.
3. Iimaylyada qashinka
Gawaarida Kiiboodhka: #
Jidka gaaban ee Gmail waxa uu qaadan doonaa iimaylada aad hadda dooratay oo u rari doonta galkaaga qashinka. Galka qashinka si toos ah ayuu u tirtiraa iimayladaada 30 maalmood ka dib. Waxa kale oo aad gacanta ku faaruqi kartaa galka qashinka wakhti kasta.
4. Dooro Dhammaan Wadahadallada
Gawaarida Kiiboodhka: *+A
Habkan gaaban ayaa dooran doona dhammaan wada sheekaysiga shaashaddaada hadda. Way ku caawinaysaa marka aad u baahan tahay inaad kaydiso, tirtirto, ama xiddigto tiro badan oo fariimo ah si degdeg ah.
5. Ka jawaab dhammaan
Gawaarida Kiiboodhka: A
Markaad isticmaasho habkan gaaban marka aad fiirinayso iimaylka, waxa ay bilaabi doontaa iimaylka jawaabta kaas oo u jawaabaya qof kasta oo helay iimaylkii asalka ahaa (maaha kaliya soo diraha). Jidka gaaban kuma jiraan dadka Cc'd ama Bcc'd ku jira iimaylka.
Gawaarida Kiiboodhka: R
Si la mid ah jid-gaabkii hore, kani waxa uu furayaa iimaylka jawaabta. Si kastaba ha ahaatee, waxay si toos ah kaliya ugu jawaabi doontaa qofka kuu soo diray fariinta asalka ah (ma aha kuwa qaata Cc'd ama Bcc'd kale).
7. Ku jawaab daaqad cusub
Gawaarida Kiiboodhka: Shift+A
Isku-dhafkan waa habka saddexaad ee "Jawaabta" ee gaaban. Jidka gaaban ee kiiboodhkan ayaa ku furi doona iimaylka jawaabta tab gooni ah, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon diyaarinta fariimaha dhaadheer.
Tusaalaha qaababka qoraalka ee kala duwan ee Gmail.
8. Qoraalka ka dhig mid farcan
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+I (Windows) ama ⌘+I (Mac)
Habkan gaaban waxa uu qaadanayaa qoraal kasta oo aad iftiimisay oo farta ku fiiqay sidan oo kale. Habkan gaaban ayaa ku fiican in aad email-kaaga si degdeg ah u habayn karto.
9. Samee Qoraal Mid Leh
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+B (Windows) ama ⌘+B (Mac)
Habkan gaaban waxa uu qaadanayaa qoraal kasta oo aad iftiimisay oo uu sameeyaa geesinimo sida tan. Isticmaalka qoraalka geesinimada leh ee iimayladaada waa hab fiican oo lagu soo jiito dareenka akhristaha si habkan gaaban uu kaa caawiyo inaad si dhakhso leh u diyaariso iimaylo badan oo soo jiidasho leh.
10. Hoos ka xarriiq qoraalka
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+U (Windows) ama ⌘+U (Mac)
Jidka gaaban ee Gmail-ka ayaa hoosta ka xarriiqi doona qoraal kasta oo aad iftiimiso sidan oo kale.
Way ku caawin kartaa inaad hoosta ka xariiqdo qoraalka iimaylka ah haddii aad rabto inaad indhaha akhristaha u sawirto qayb cayiman oo jumlad ah, sida “I ma samayn waxay rabaan carnations beerta."
Sida ay dadku u sawiran yihiin iimaylada, qaabaynta iimaylkaagu waxay ka dhigi doontaa caddaymahaaga.
11. Qoraal ku dhufan
Gawaarida Kiiboodhka: Alt+Shift+5 (Windows) ama ⌘+Shift+X (Mac)
Jidka gaaban waxa uu dhex mari doonaa qoraal kasta oo aad dooratay, sida tusaalahan.
12. Fur Google Tasks
Gawaarida Kiiboodhka: G+K
Jidka gaaban wuxuu furi doonaa tabka "Hawlahayga" ee Google Tasks ee dhinaca bidix ee shaashaddaada. Waxaad ku dari kartaa hawlo cusub oo la qabto tabkan, sax hawlaha, ama wax ka beddel hawlahaaga hadda.
13. Kudar wada sheekaysiga Google Tasks
Gawaarida Kiiboodhka: Shift+T
Jidka gaaban ee kiiboodhkan ayaa ku dari doona wada hadalka aad u aragto hawl ku cusub Google Tasks. Jidka gaaban waxa uu shaqeeyaa kaliya marka aad gujiso iimaylka.
Waa wax ku anfacaya marka la samaynayo qoraal shay dib loogu soo noqonayo - sida codsi ah in dukumeenti loo diro saaxiibkiis. Markaad wadahadal ku darto Google Tasks, waxay u egtahay sidan:
Tusaale ku darista iimaylka Google Tasks ee Gmail.
14. Dir Email
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Enter (Windows) ama ⌘+Enter (Mac)
Markaad isticmaasho jidkan gaaban, waxay si toos ah kuu soo diri doontaa iimaylka ama jawaabta aad hadda ku shaqaynayso. Haddii aad si lama filaan ah u isticmaashid jidkan gaaban, waxaad ku dhufan kartaa badhanka "Ka noqo" dhowr ilbiriqsi gudahood si aad u joojiso iimaylka soo dirida (waa haddii aad karti u siisay "Ka noqo dir" goobahaaga).
15. Geli Linkiga
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+K (Windows) ama ⌘+K (Mac)
Jidka gaabani waxa uu keenayaa widget-ka "Edit Link" Widget-kan, waxaad ku qori kartaa qoraal si aad u muujiso oo aad URL ka geliso shabakad ama ciwaanka iimaylka. Waxaad hoos ka arki kartaa widget-ka:
Tusaale wax ka beddelka isku xirka Gmail.
16. Ku dar dadka qaata Cc emailkaaga
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+C (Windows) ama ⌘+Shift+C (Mac)
Jidka gaaban wuxuu ku dari doonaa bar "CC" iimaylka aad hadda ku shaqaynayso. Halkan, waxaad ku qori kartaa ciwaannada dadka si aad ugu darto Cc' ahaan. Jidka gaaban wuxuu shaqeeyaa kaliya marka aad leedahay iimaylka furan.
17. Ku dar qaataha Bcc emailkaaga
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+B (Windows) ama ⌘+Shift+B (Mac)
Jidka gaaban ee Gmail wuxuu ku darayaa bar "Bcc" iimaylka aad hadda qorayso. Waxaad ku dari kartaa Bcc-yada adiga oo ku qoraya ciwaanadooda. Mar labaad, habkan gaaban wuxuu shaqeeyaa oo keliya markaad diyaarinayso iimaylka.
18. Ku dar Liiska Tirooyinka leh
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+7 (Windows) ama ⌘+Shift+7 (Mac)
Jid-gaabni waxa ay ku dari doontaa liis nambaraysan khad kasta oo qoraal ah oo aad dooratay. Waxay u egtahay sidan:
Qoraal Dheeraad ah
Xitaa Qoraal Dheeraad ah
19. Ku dar Liis Xabad leh
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+8 (Windows) ama ⌘+Shift+8 (Mac)
Sida "Ku dar Liis Nambareed leh" gaagaaban, kani wuxuu ku darayaa liis la calaamadiyay qoraalka la doortay. Waxay u egtahay sidan:
20. Kordhi cabbirka qoraalka
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift++ (Windows) ama ⌘+Shift++ (Mac)
Jidka gaaban wuxuu kordhin doonaa cabbirka qoraalka kasta oo aad iftiimisay (halkii ay suurtagal tahay). Gmail waxa uu leeyahay afar cabbir qoraal oo aasaasi ah: yar, caadi, weyn, iyo weyn. Amarkani ma shaqayn doono haddii aad hore u dejisay cabbirka fartaada "weyn."
21. Yaree cabbirka qoraalka
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+- (Windows) ama ⌘+Shift+- (Mac)
Sida gaaban "kordh cabbirka qoraalka", kani wuxuu yareynayaa cabbirka qoraal kasta oo aad iftiimisay. Mar labaad, tani waxay shaqayn doontaa oo keliya haddii uu jiro cabbir qoraal oo ka yar cabbirkaaga hadda.
22. Ka noqo
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Z (Windows) ama ⌘+Z (Mac)
"Ka noqo" had iyo jeer waa dariiq gaaban oo faa'iido leh oo aad gacanta ku hayso. Waxay dib u dhigaysaa falkii ugu dambeeyay ee aad samaysay (halkii ay suurtagal tahay). Tusaale ahaan, haddii aad si lama filaan ah ugu rartay iimaylka qashinka, marin-yaraaneedkan ayaa ku soo celin doona sanduuqaaga Gmail-ka.
23. Dib u laabo
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Y (Windows) ama ⌘+Y (Mac)
"Redo" waa lidka "Ka noqo." Markaad isticmaasho jidkan gaaban, waxay dib u habayn doontaa falkii ugu dambeeyay ee aad samaysay (halkii ay suurtagal tahay).
24. Ku dar xigasho
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+9 (Windows) ama ⌘+Shift+9 (Mac)
Jidka gaaban ee Gmail-ka ayaa qaadan doona qoraal kasta oo aad iftiimisay oo u rogi doona xigasho. Qaababka Gmail waxay u soo xiganayaan qoraalka si ka duwan qoraalka caadiga ah, markaa qoraalkaaga xigashada ayaa soo muuqan doona. Waxay u egtahay sidan iimaylka:
Tusaalaha xigashada habaynta qoraalka ee Gmail.
25. Soo jeedin Higaada Furan
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+M (Windows) ama ⌘+M (Mac)
Markaad isticmaasho habkan gaaban marka aad qorayso iimaylka, Gmail waxa uu qori doonaa sixida qoraalkaaga.
Gunnada gaaban: Daaqadaha, waxaad isticmaali kartaa Ctrl+; iyo Ctrl+' si aad ugu socotid talooyinka higaada ee hore iyo kan xiga. Gaaban gunnadan waxay ka shaqeysaa Mac, sidoo kale - kaliya waxaad u baahan tahay inaad beddesho Ctrl ilaa ⌘. ⌘.
26. Ka saar Qaabaynta
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+ (Windows) ama ⌘+ (Mac)
Jidka gaaban wuxuu ka saari doonaa dhammaan qaabaynta qoraalka aad iftiimisay, isaga oo ka tagaya kaliya qoraalka cad. Tusaale ahaan, "web devexuubkiier"wuxuu noqonayaa "sameeyaha shabakada."
27. Yaree gelida qoraalka
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+[ (Windows) ama ⌘+[ (Mac)
Jidka-gaabni waxa uu yareeyaa galitaanka qoraalkaaga, isaga oo u dhaqaajinaya dhanka bidix ee shaashadda (halkii ay suurtagal tahay).
28. Kordhi soo gelida qoraalka
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+] (Windows) ama ⌘+] (Mac)
Si la mid ah jid-gaabkii hore, kani wuxuu kordhinayaa soo gelidda qoraalkaaga. Markaad kordhiso galitaanka qoraalka, qoraalkaagu wuxuu u wareegayaa midigta shaashadda. Habkan gaaban waa mid faa'iido leh marka aad u baahan tahay inaad si degdeg ah u dhexgeliso qaybaha muhiimka ah ee emailkaaga.
29. Ku toosi qoraalka xarunta shaashadda
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+E (Windows) ama ⌘+Shift+E (Mac)
Jidka gaaban ee Gmail waxa uu beddeli doonaa isku toosinta qoraal kasta oo la iftiimiyay una gudbaya badhtamaha shaashadda, isaga oo ka dhaqaajinaya qaybta la iftiimiyay ee dhexda toosinta bidix ee caadiga ah.
30. Ku toosi qoraalka dhanka midig ee shaashadda
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+R (Windows) ama ⌘+Shift+R (Mac)
Ma u baahan tahay xawli-socod, la isku halayn karo, oo si buuxda u martigelinaysa boggaga WordPress? Behmaster waxay bixisaa dhammaan waxyaalahan iyo 24/7 taageero heer caalami ah oo ka socota khabiirada WordPress. Eeg qorshayaashayada
Jidka gaaban waxa kale oo uu beddeli doonaa toosinta qoraal kasta oo la iftiimiyay, laakiin waxa ay u beddeli doontaa midig. Isticmaalka tan waxay toosin doontaa dhammaan qoraalka la iftiimiyay dhanka midig.
31. Ku toosi qoraalka dhanka bidix ee shaashadda
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+l (Windows) ama ⌘+Shift+l (Mac)
Jidka gaaban waxa uu beddelaa isku toosinta qoraal kasta oo la iftiimiyay oo dib loogu celinayo dhinaca bidix ee shaashadda. Maaddaama kani uu yahay isku-habaynta caadiga ah, habkan gaaban waxa uu ku shaqeeyaa oo keliya qoraalka ku toosan dhinaca dhexe ama dhinaca midig ee shaashadda.
32. Ku calaamadee iimaylka mid muhiim ah
Gawaarida Kiiboodhka: + or =
Jidka gaaban wuxuu calaamadin doonaa dhammaan iimaylada la doortay inay muhiim yihiin. Markaad isticmaasho, Gmail wuxuu soo bandhigi doonaa ogeysiin odhanaya, "Wadahadalku waa muhiim."
Gmailku waxa uu sanduuqa kaaga ku calaamadeeyaa iimaylada "muhiimka ah" oo wata calaamad jaale ah oo yar.
33. Ku calaamadee iimaylka mid aan muhiim ahayn
Gawaarida Kiiboodhka: -
Gmail waxa ay ka saari doontaa summada "muhiimka ah" iimaylka aad u calaamadisay in uu muhiim yahay marka aad isticmaalayso jidkan gaaban. Waa inaad marka hore doorataa iimaylka si uu u shaqeeyo gaabni.
34. U calaamadee sida wax loo akhriyo
Gawaarida Kiiboodhka: Shift+I
Markaad isticmaasho jidkan gaaban, waxay calaamadin doontaa iimayl kasta oo la doortay si loo akhriyo. Isticmaalka habkan gaaban waxay meesha ka saaraysaa meelaha Gmail-ka ee iftiiminaya iimaylada aan la akhriyin. Dabcan, habkan gaaban wuxuu ku shaqeeyaa kaliya iimaylada aan la akhriyin.
35. Calaamadee sida Lama aqrin
Gawaarida Kiiboodhka: Shift+U
Markaad isticmaasho jidkan gaaban, waxay ku calaamadayn doontaa iimaylo kasta oo la akhriyay oo aad dooratay inay yihiin kuwo aan la akhriyin. Habkan gaaban ayaa iftiimin doona iimaylka ku jira sanduuqaaga boostada, iyadoon loo eegin inaad hore u furtay iyo in kale.
36. Balaadhi wada sheekeysiga
Gawaarida Kiiboodhka: ;
Jidka gaaban waxa uu balaadhiyaa iimaylada oo leh jawaabo badan Markaad isticmaasho, waxay si toos ah u furi doontaa dhammaan jawaabihii iimaylkii hore, ugu yaraan ilaa kii u dambeeyay. Waxa kaliya oo ay shaqeysaa marka aad aragto iimaylka furan.
37. Burbur Wadahadalka
Gawaarida Kiiboodhka: :
Si la mid ah, marin-gaabeedkan Gmail waxa uu dumiyaa iimaylada ka dib markaad balaadhiso. Gmail waxa ay ku tusi doontaa jawaabtii ugu dambaysay iimaylka shaashaddaada marka aad isticmaasho habkan gaaban. Weli waxaad arki kartaa jawaabaha iimaylka duugga ah adiga oo gujinaya horudhacooda ama isticmaalaya ;.
38. Gudbinta Emailka
Gawaarida Kiiboodhka: F
Jidka gaaban waxa uu furayaa shaadhka gudbinta iimaylka ee daaqadaada hadda. Waxaad si fudud u baahan tahay inaad ku qorto ciwaanka qaatahaaga iyo nooca Shift+ Geli si aad u gudbiso emailka.
39. Gudbinta iimaylka Daaqad Cusub
Gawaarida Kiiboodhka: Shift+F
Jidka gaaban wuxuu furayaa ikhtiyaarka loogu gudbin karo iimaylka daaqad cusub. Isticmaalka habkan gaaban ayaa si gaar ah faa'iido u leh haddii aad doorbidayso inaad akhrido dhammaan iimaylladaada hal mar ka hor intaadan ka jawaabin.
40. U soo sheeg iimaylka sida Spam ahaan
Gawaarida Kiiboodhka: !
Jidka gaaban ayaa ka warbixin doona iimaylka aad dooratay spam. Gmail waxa ay si toos ah u soo dirtaa iimayl kasta oo lagu soo warramey in uu yahay spam galka spamka.
Gmail waxa kale oo uu si toos ah u calamaa iimaylada tiro badan oo lifaaqyo ah iyo ereyo fure ah sida “free” iyo “spam”. Haddii dadka qaataha ahi ay inta badan ka maqan yihiin iimaylladaada, waxa laga yaabaa inay u socdaan spam.
Tagitaanka galka "Spam" ee Gmail.
41. Fur Folderka "Farimaha la diray".
Gawaarida Kiiboodhka: G+T
Jidka gaaban ee hagitaanku waa mid aad u fiican in si degdeg ah loogu wareego sanduuqaaga boostada. Markaad isticmaasho, waxay si toos ah kuugu geyn doontaa galkaaga "Farriimaha la diray". Galkan waxa ku jira iimayl kasta oo aad ka jawaabtay, u gudbisay, ama dirtay.
42. Fur galka "Qabyada"
Gawaarida Kiiboodhka: G+D
Sida "Faylka Farimaha Farriimaha La Diray" ee gaaban, habkan gaaban ee Gmail wuxuu ku geynayaa galkaaga "Qabyada". Gmail waxa uu si toos ah u kaydiyaa dhamaan iimaylada aad bilowday balse aanad wali ku soo dirin galkaaga "Qabyada".
43. Eeg Liiska Wadahadalka Xiddigta Leh
Gawaarida Kiiboodhka: G+S
Jidka gaaban wuxuu shaashaddaada ka saarayaa dhammaan wada sheekaysiga aan xiddigta lahayn. Waxay ku shaqayn doontaa galkaaga "Sent" iyo sanduuqaaga. Haddii aad rabto inaad ka noqoto falkan, si fudud u riix "Ka noqo" ama Ctrl + Z/⌘+Z.
44. aamusi Wadahadalka
Gawaarida Kiiboodhka: M
Jidka gaaban ayaa u anfacaya qof kasta oo hela warar joogto ah oo ku saabsan silsiladda iimaylka. Gmail waxa ay daminaysaa iimaylka aad dooratay marka aad isticmaalayso habkan gaaban, taas oo la macno ah in aad wali heli doonto wax cusub iyo jawaabaha iimaylka, laakiin ma heli doontid ogeysiisyo.
45. Raadi sanduuqa boostada
Gawaarida Kiiboodhka: /
Jidka gaaban wuxuu furayaa baararka raadinta ee ku yaal xagga sare ee sanduuqaaga boostada. Si aad u isticmaasho, si fudud u qor kelmad muhiim ah sida "Tom" oo taabo geli si aad u aragto dhammaan iimaylada leh ereyga muhiimka ah "Tom." Haddii aad rabto inaad raadiso shay gaar ah, isku day inaad isticmaasho hawlwadeennadan raadinta Google.
Baarka raadinta ee Gmail
46. ​​U beddel xarfaha xarfaha xiga
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+5 (Windows) ama ⌘+Shift+5 (Mac)
Jidka gaabani waxa uu beddelaa qaabka far kasta oo la iftiimiyay una beddelo farta xigta ee liiska Gmailka. Gmail waxa ku jira kow iyo toban farood oo default ah, laakiin waxaad ku dari kartaa xarfaha gaarka ah haddii aad doorato.
47. U beddel xarfaha xarfo hore
Gawaarida Kiiboodhka: Ctrl+Shift+6 (Windows) ama ⌘+Shift+6 (Mac)
Jidka gaaban ee Gmail waxa uu beddelaa qaabka far kasta oo la iftiimiyay una beddelo fartii hore ee liiska Gmailka.
48. Arag Keyboardkaaga Gmail-ka Gaaban
Gawaarida Kiiboodhka: Shift+? (Windows) ama ⌘+? (Mac)
Jidka gaaban waxa uu keenayaa menu-ga gaaban ee kiiboodhka Gmail.
Xaashida Khiyaanada ee Gaaban ee Gmail
Halkan waxaa ah liis tixraac degdeg ah oo ku saabsan dhammaan furayaasha kiiboodhka Gmail ee aan ku soo koobnay maqaalkan.
Kaydi iimaylada E E
Qor iimaylka C C
iimaylada qashinka # #
Dooro dhammaan wada sheekaysiga *+A *+A
Jawaab dhamaan A A
Ku jawaab daaqad cusub Shift+A Shift+A
Ka dhig qoraalka farta lagu fiiqay Ctrl + I ⌘+I
Ka dhig qoraalka mid geesinimo leh Ctrl + B ⌘+B
Hoos ka xarriiq qoraalka Ctrl + U ⌘+U
Qoraal ku dhufasho Alt + Shift+5 ⌘+Shift+X
Fur Google Tasks G + K G + K
Kudar wada sheekaysiga Google Tasks Shift+T Shift+T
U dir email Ctrl + Ku qor ⌘+Gali
Geli xiriiriye Ctrl + K ⌘+K
Ku dar qaataha Cc iimaylka Ctrl + Shift + C ⌘+Shift+C
Ku dar qaataha Bcc iimaylka Ctrl + Shift + B ⌘+Shift+B
Ku dar liiska rasaasta leh Ctrl + Shift + 7 ⌘+Shift+7
Ku dar liis nambaraysan Ctrl + Shift + 8 ⌘+Shift+7
Kordhi cabbirka qoraalka Ctrl+Shift++ ⌘+Shift++
Iska yaree cabbirka qoraalka Ctrl+Shift+- ⌘+Shift+-
Hoos u dhig Ctrl + Z ⌘+Z
Redo Ctrl + Y ⌘+Y
Ku dar xigasho Ctrl + Shift + 9 ⌘+Shift+9
Fur talooyinka higaada Ctrl + M ⌘+M
Ka saar habaynta Ctrl + ⌘+
Yaree galitaanka qoraalka Ctrl+ ⌘+
Kordhi gelinta qoraalka Ctrl+] ⌘+]
Ku toosi qoraalka bartamaha shaashadda Ctrl + Shift + E ⌘+Shift+E
Ku toosi qoraalka dhanka midig ee shaashadda Ctrl + Shift + R ⌘+Shift+R
Ku toosi qoraalka dhanka bidix ee shaashadda Ctrl+Shift+l ⌘+Shift+l
U calaamadee iimaylka mid muhiim ah = ama + = ama +
U calaamadee iimaylka mid aan muhiim ahayn - -
Calaamadee iimaylka sida loo akhriyay Shift+I Shift+I
U calaamadee iimaylka mid aan la akhriyin Shift+U Shift+U
Balaadhi wada hadalka ; ;
Burbur wada hadalka : :
iimayl u gudbi f f
U gudbi iimaylka daaqad cusub Shift+F Shift+F
U soo sheeg iimaylka sidii spam ! !
Fur folder "Sent Messages". G+T G+T
Fur galka "Qabyada" G+D G+D
Eeg wada sheekaysiga xidigta leh kaliya G+S G+S
aamusi wada hadalka M M
Ka raadi sanduuqa boostada / /
U beddel farta ku xigta Ctrl + Shift + 5 ⌘+Shift+5
U beddel xarfaha fartii hore Ctrl + Shift + 6 ⌘+Shift+6
Arag kiiboodhka Gmail-ka gaaban Shift+? ⌘+?
Waqti yar oo emaylka ah, waqti badan oo ku raaxaysiga waxyaabaha aad jeceshahayRiix halkan Tweet
Waxay qaadan kartaa wakhti yar in la barto dhammaan furayaasha kiiboodhka Gmail ee ugu wanaagsan. Markaad isticmaasho jid-gaab kasta dhawr jeer, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si dhakhso leh oo hufan u dhex gasho sanduuqaaga boostada, kordhinta wax soo saarkaaga oo aad yarayso wakhtiga ku baxaysa sanduuqaaga.
In kasta oo aanu ku soo darnay 48-ka fur-gaab ee kiiboodhka Gmail ee ugu wanaagsan, qaar kuwaas ka mid ah ayaa adiga kaa faa'iidaysan doona kuwa kale. Waxay u badan tahay inay ku qaadato wakhti aad ku heshid jid-gaabyadaada, laakiin dadaalka ayaa u qalma kor u qaadista wax soo saarka.
Jidka gaaban ee kiiboodhka Gmail ee aad ugu jeceshahay? Nala wadaag faallooyinka!
Waa maxay Xogta Wayn iyo sababta Istaraatiijiyad kasta oo suuqgeyneed ugu baahan yahay xulafadan
Tijaabo: Instgram-ka Ma Badbaadiyaa Jecelka Cusub?